တမိုးပြင်၊ တမိုးအောက် နှင့် ကောင်တာ – Lynn Htaik Aung – Medium
Lynn Htaik Aung
တမိုးပြင်၊ တမိုးအောက် နှင့် ကောင်တာ
မြန်မာပြည် ဟာ နိုင်ငံရေး နှင်းခဲပျော်ချိန်နဲ့ အတူ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေလည်း ပွင့်လင်းလာလို့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်နေလျက်ပါ။ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ အတူ ကျွဲကူးရေပါဆိုသလို ဘဏ္ဍာရေးအခြေခံအဆောက်အုံတွေအားကောင်းဖို့ အားသွန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းသူ၊၀ယ်သူ၊ပေးစရာရှိသူ၊ ရစရာရှိသူ တွေကြားထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကတော့ ငွေပေးချေနည်းလမ်းများပါပဲ။
အခုကျနော်ရှင်းပြချင်တာကတော့ တမိုးပြင်၊ တမိုးအောက် နှင့် ကောင်တာ ငွေချေနည်းတွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ၊ သူတို့ကဘာတွေလဲ။
တမိုးပြင် ငွေချေ (Open-loop payment)
ဈေးဝယ်သူမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေသား ကို ဈေးရောင်းသူ(လုပ်ငန်း) တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲချိတ်ဆက်ထားသော ဈေးရောင်းသူ(လုပ်ငန်း)များရဲ့ ငွေချေလက်ခံစနစ်ပေါ်မှ ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ မှာဆို Google Wallet ၊ Paypal ၊ Master Card ၊ Visa ၊ CUP ၊ JCB စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် MPU ၊ Wave Money ၊ Myanmar Mobile Money ၊ MyKyats ၊ 663 ၊ OK$ နှင့် MAB Mobile တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Open-loop payment flow
တမိုးအောက် ငွေချေ(Closed-loop payment)
ဈေးဝယ်သူမှ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေသားကို သတ်မှတ်ထားသော ဈေးရောင်းသူ(လုပ်ငန်း) တစ်ခုတည်းအတွက်သာ ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာဆို Starbucks၊ McDonald’s တို့မှ ၄င်းတို့ ဖောက်သည်များကို ထုတ်ပေးသော Mobile Wallet(သို့) Card များပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာဆို City Mart မှ ထုတ်ပေးသော ကတ်များ သည် တမိုးအောက်ငွေချေ နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Closed-loop payment flow
ကောင်တာငွေချေ(Over the counter payment)
ဈေးဝယ်သူမှ ငွေသားဖြင့် ဈေးရောင်းသူ(လုပ်ငန်း)များ၏ ကောင်တာငွေချေစနစ်တွင်ပါဝင်သောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်တာငွေချေစနစ်တွေသည် အများအားဖြင့် ဘေလ်ဆောင်ခြင်း(Public Utilities)၊ ဖုန်းငွေဖြည့် နှင့် တခြား ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀န်ဆောင်မှုများပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုတမိုးပြင်ငွေချေစနစ်ကိုင်ဆောင်ထားသော ဈေးဝယ်သူများသာ အခွင့်အရေး ရနေတဲ့ အင်တာနက်ဈေးဝယ်(e-commerce) ကို အခုဆို ကောင်တာငွေချေစနစ်ကြောင့် လူတိုင်း ခံစားနိုင်နေပါပြီ။ တခြားနိုင်ငံမှာဆို Counter Service(7 Eleven)၊ Tesco Lotus စသည်တို့ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်တွင်းမှာဆို 1-STOP ၊ PayHere(ABC Convenience Stores) ၊ RedDot နှင့် @POST(Myanmar Post Office) တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Over the counter payment flow
Like what you read? Give Lynn Htaik Aungaround of applause.
Never missastory from Lynn Htaik Aung, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Lynn Htaik Aung